ချစ်သူများနေ့တွင်ပျော်မွေ့ရန်စုံလင်သောရင်ခုန်စရာစာအုပ် ၁၄ ခု | eReaders အားလုံး
ယနေ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်နေရာတိုင်းတွင်သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီး၎င်းသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသရန် Valentine's Day ဖြစ်သည်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားချစ်မြတ်နိုးကြောင်းပြရန်နှင့်အကောင်းဆုံးသောအချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း။ Valentine's Day မှာပျော်မွေ့ရန်စုံလင်သောအချစ်ဇာတ်လမ်း ၁၄ လုံးကိုတွေ့နိုင်မည့်ဤစာရင်းကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အတွက်အလွန်လွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်။ မည်သည့်နေ့တွင်မဆိုချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောကြောင့်သို့မဟုတ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုဖို့။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစာရင်းတွင်အချစ်ဇာတ်လမ်း ၁၄ ခုနှင့်လိင်အစဉ်အမြဲတည်ရှိနေသောနေရာကိုစုဆောင်းမိခဲ့ကြသော်လည်းကံကောင်းထောက်မစွာ၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းသည်ဖက်ရှင်တွင်ရှိနေပြီးဤ ၀ တ္ထုအမျိုးအစားများကိုစာရေးသူများသည်များပြားလှသောရောင်းအားများသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ပုံပြင်များ၏။
1 Valeria ရဲ့ဖိနပ်ထဲမှာ
3 တစ်ညပို။ ဘာမျှမ
6 ချစ်ခင်ရပါသော Jhon
8 Silvia ကိုလိုက်ဖမ်း
15 မီးခိုးရောင်၏အရိပ် 50
Valeria ရဲ့ဖိနပ်ထဲမှာ အားဖြင့် Valeria Saga အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ် Elizabeth Benavent အမေဇုံတွင်ကိုယ်တိုင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ ဝေဖန်သူများနှင့်စာဖတ်သူများအားလုံး၏အသိအမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့သည်။
Valeria တွင်သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ရှိသည်။ Nerea, Carmen နှင့် Lola ။
Valeria ငို, Valeria ရယ်, Valeria လမ်းလျှောက် ...
Pila Cabrero မှဤဝတ္ထုသည် ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုမှမရှိသည့်စစ်မှန်သောအချစ်ဇာတ်လမ်း။ မာတီနာသည်ဇတ်ကောင်ဖြစ်သည့်အပြင်အသက် ၈ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နှင့်အတူစိတ်ရှုပ်ထွေးနေသောအိမ်ထောင်ရေးအပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားရပုံရသည်။
သူမ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသင်သိလိုပါကမမျှော်လင့်သောအရာတစ်ခုကိုသင် ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
ခေါင်းစဥ် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ ဒီဂျူလီယာကွနင်ဝတ္ထုထဲမှာကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တဲ့အရာများစွာကိုပြောထားပြီးပြီ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသောအချစ်ဇာတ်လမ်းအတွက်အဆင်သင့်ပြင်ထားပါ။ ဇာတ်ကောင်များသည်လူငယ်နှစ် ဦး မဟုတ်သော်ထိုအချစ်ဇာတ်လမ်းသည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဆုံးရှုံးစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်တစ်နည်းနည်းဖြင့်တစ်ညသာအချိန်ယူလိုပါကဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစာအုပ်ကိုမဖတ်ပါနှင့်၊ ယင်းကိုမ ၀ ယ်ပါနှင့်၊ အထူးသဖြင့်ဖတ်ပါ။
ချုပ်ရိုးများအကြားအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည် မာရီနာအန်နက်စ်စ်၏ပထမဆုံးဝတ္ထုမှာသူသည်ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားသောစပိန်စာရေးဆရာတစ် ဦး အဖြစ်သူ့ကိုယ်သူထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်အပျက်များသည်ဆိုင်းငံ့ခြင်းကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပြီးလူအများအပြားကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးသန်းပေါင်းများစွာသောလူများကမြင်တွေ့ခဲ့ရသောရုပ်မြင်သံကြားစက်ရုံပေါ်သို့ဆင်းသက်ခဲ့သည်။
သင်သည်ဤလှပပြီးဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းကိုမလွတ်လိုပါက Amazon မှတစ်ဆင့် The Time Between Seams ကို ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
En ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ နာမည်ကြီးရော့ခ်ဂီတအဖွဲ့မှဂစ်တာသမားလူငယ်တစ် ဦး သည်မူးယစ်ဆေးဝါးပြproblemsနာများကြောင့်သူသည်ဆေးခန်းသို့တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပြီးသူသည်အာဟာရပညာရှင် Miranda ကိုချစ်မြတ်နိုးလာသည့်ဤဇာတ်လမ်း၏အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။
ပထမတော့သူကထူးဆန်းတဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကငါတို့ကိုလှပတဲ့ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပေးတဲ့နောက်ထပ်ချစ်သူနှစ် ဦး ဖြစ်သွားတယ်။
မိခင်မရှိဘဲနှင့် numismatics စွဲလမ်းနေသူဖခင်နှင့်အတူရှုပ်ထွေးသောကလေးဘဝသည်ဤဇာတ်လမ်း၏အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သော John Tyree သည်သူ၏မြို့နှင့်အထူးသဖြင့်သူ၏မိသားစုကိုစွန့်ခွာရန်စစ်ထဲ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအရာများဖြစ်သည်။ သို့သော် သူသည်အိမ်ပြန်ခွင့်နှင့်အိမ်ပြန်ပြီး Savannah နှင့်တွေ့သောအခါထိုလူငယ်အတွက်အရာရာတိုင်းမှားယွင်းနေသည်.
ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ဂျွန်စစ်တပ်ပြန်သွားဖို့ရှိသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာပျောက်ကွယ်သွားပေမယ့်သာပိုသွားသည်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌အရူးလဲ။ သငျသညျချစ်ခင်ရပါသော Jhon ဆည်းပူးနိုင်ပါတယ် ဒီမှာ.
ဆေးလ်ဗားနေ့သည်သူမအားသုံးရက်ကြာလေ့ကျင့်မှုကြောင့်ယခုအချိန်တွင်စာရေးဆရာများအနက်မှတစ် ဦး ဖြစ်သည် ငါသည်သင်တို့ဆီမှသို့မဟုတ် Crossfire ထံမှဘာမှဖုံးကွယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းတွင်သူသည်မြင့်မားသောဗို့အားချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ထုတ်ရန် Gideon Cross ၏ပုံပန်းသဏ္tellsာန်သည်မှောင်မိုက်နေသည့်အလင်းရောင်နှင့်တူသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံချက်ဖြစ်ပါတယ် အကယ်၍ သင်သည်ကောင်းမွန်သောအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုနှစ်သက်လိုပါကလူကြိုက်များသောဤသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏ပထမ ဦး ဆုံးစာအုပ်ကိုမဖတ်ပါနှင့်ပြီးတော့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းကိုဖြည့်စွက်သည့်အခြားစာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုလည်းလက်လွတ်မခံပါနှင့်။
ဒါကဒုတိယစာအုပ်ပါ Elisabet benavent ဒီစာရင်းထဲမှာငါတို့တွေ့နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ဟာသူဟာအခုအချိန်မှာလူကြိုက်အများဆုံးစပိန်စာရေးဆရာတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအချစ်ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာရောင်းအားအများဆုံးနဲ့နောက်လိုက်တွေထဲမှာပါပါတယ်။ Silvia ကိုလိုက်ဖမ်း Silvia သည်ဇတ်ကောင်ကြီးဖြစ်ပြီးသူမဘဝကိုသင်မလွဲစေသင့်သည့်အလှည့်အပြောင်းဖြစ်စေသည့်ကြယ်တစ်ပွင့်နှင့်တွေ့ဆုံသည့်အချိန်အထိ“ မင်းနဲ့မရော၊ သင်ပါပါချစ်ခြင်းမေတ္တာ” ကိုခံစားခဲ့ရသည့်ဇာတ်ကောင်နှစ် ဦး အနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သန်းကြွယ်သူဌေး၊ အစွမ်းထက်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာလည်းပါ ၀ င်ပြီး၊ ဤဇာတ်လမ်းစသည့်အချိန်အထိအလုပ်များကိုခံစားမှုနှင့်ခွဲခြား။ အုပ်ချုပ်သောအုပ်ချုပ်မှုရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ ရှီလာဟော့ပ်ကင်စ်ကသူတို့ကိုမီးပွားများကြားတွင်ပျံသန်းစေခြင်းဖြင့်ဤစည်းမျဉ်းကိုချိုးဖျက်နိုင်သည်။
သူတို့အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြရသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစိတ်ဝင်စားစရာထက်မကမြင်ရန်အဟန့်အတားမဟုတ်ပါ Zeke Travers နှင့် Sheila Hopkins ရှိအချစ်ဇာတ်လမ်း အတွက်ထင်ဟပ် တွန်းလှန်သွေးဆောင်မှု.
ဒီဝတ္ထုရဲ့ခေါင်းစဉ်ကသာအမြင့်ဆုံးအကြံပြုချက်ဖြစ်ပြီး၊ အချိန်ပိုင်းမူဆယ်ကိုကမ်းလှမ်းတာဟာငါဘယ်သူ့ကိုမှလည်း၊ ထို့အပြင် Didie အလုပ်အကိုင်အားဖြင့်မူဆယ်ဖြစ်ပြီးစည်းကမ်းအဖြစ်သူမ၏နှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာမှတားမြစ်ကတည်းကကတည်းကခေါင်းစဉ်အများဆုံးအထောက်အကူပြုဖြစ်ပါတယ်။
Didie ကဒီဝတ္ထုထဲမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတွေ့လိမ့်မယ်လို့မင်းထင်လား။ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အချိန်ပိုင်းမူဆယ်ရယူခြင်းအားဖြင့်ယခုထွက်စစ်ဆေးပါ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။.
မင်းလိုချင်တာကိုအရောင်းရဆုံးနဲ့လူကြိုက်အများဆုံးအချစ်ဇာတ်လမ်းတွေထဲကတစ်ခုပါပဲ။ လက်မှတ်ထိုး Megan maxwell နှင့်သုံးစာအုပ်တွေရေးစပ်; သင်ဘာကိုလိုချင်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားမေးပါ၊ သင်ဘာကိုလိုချင်တာလဲလို့မေးပါ။
သူတို့ကို၌ ဖခင်ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်စပိန်သို့ခရီးထွက်ခြင်းနှင့်သွေးဆောင်မှုကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောသောဂျူဒစ်နှင့်အတူအရူးအမူးစွဲလမ်းနေသောအဲရစ်ဇင်မမန်းအကြောင်း။ ထိုအရပ်မှသင်သည်မေ့မထားသင့်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လိင်၏ကြီးမားသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာသည်။
Louisa Clark သည်သူမ၏ဘဝကိုထိန်းချုပ်ထားပုံရပြီးသူမ၏လက်ရှိရည်းစားကိုလိုချင်ခြင်းမရှိသောအချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်မတော်တဆမှုတစ်ခုနှင့်အတူနေထိုင်ရန်သူ၏အလိုတော်ကို Will Traynor မှဖယ်ရှားခဲ့သည်။
Clark ၏အလုပ်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် Will နှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရခြင်းတို့သည်သူတို့၏ဘ ၀ နှစ်ခုလုံးကိုလုံးလုံးပြောင်းလဲစေပြီးမည်သူမဆိုမျှော်လင့်နိုင်ခဲသည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ရှင်သန်နိုင်သည်။ စာအုပ်ရဲ့အစမှာဒါမှမဟုတ်ဒီအကျဉ်းချုပ်ထဲမှာမင်းပြောခဲ့တာတွေနဲ့။
မင်းရှေ့မှာငါကမင်း ၀ ယ်လို့ရတဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စာအုပ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲ ဒီမှာ.
Chloe Mills သည်အသိဉာဏ်ရှိသော၊ ကြိုးစားအားထုတ်တတ်သောမိန်းမငယ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူလုပ်ရန်ကြိုးစားသမျှကိုအောင်မြင်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ သူမမှာပြbossနာတစ်ခုရှိသည်။ သူမသည်သူဌေးဖြစ်သူ Bennett Ryan ဖြစ်သည်။ သူသည်တောင်းဆိုမှုများပြင်းထန်သည်၊ ရိုင်းစိုင်းသည်၊
ငါဟာမင်းကိုအများကြီးပြောစရာမလိုဘူးလို့ထင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Chloe Mills နဲ့ Bennett Ryan တို့အကြားဇာတ်လမ်းဘယ်လိုအဆုံးသတ်သွားမယ်ဆိုတာသင်တို့အားလုံးမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရာရာတိုင်းဟာပုံမပေါ်ဘူးဆိုတော့ချက်ချင်းပဲစာစဖတ်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ် လှတယ် ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့အဆုံးကိုသိဖို့။
ဒွန် Tillman သည်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဘဝနှင့်အားကစားများတွင်အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်မည်သည့်အမျိုးသမီးနှင့်မဆိုသူနှင့်ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံခွင့်မရရှိသည့်နေရာတွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌မရှိ။ သူသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာလောကတွင်မအောင်မြင်နိုင်ပါကသူစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်သည် အဆိုပါဇနီးစီမံကိန်း, မည်သည့်အချိန်တွင်သင်တို့ကိုစိတ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသင်တို့ကိုအာမခံသော။
ငါ့ထင်မြင်ချက်ကိုသိချင်ရင် ဒီစာအုပ်မှာယူရိုငွေအနည်းငယ်သုံးပါ၊ မင်းကိုအံ့အားသင့်စေမှာပါ၊.
ဤစာရင်းကိုပိတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အပါအဝင်မရပ်နိုင်ပါ မီးခိုးရောင်၏အရိပ် 50နောက်ထပ်သုံးဖက်မြင်အတွေးအခေါ်ပညာသည်အလွန်အရေးပါသောဇာတ်ကောင်များဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည် ခရစ်ယာန် Grey နှင့် Anastasia သံမဏိ သူတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှလူအမြောက်အများကိုတုန်ခါခဲ့သည်။
ဒီ trilogy ပာ၏ဒုတိယဝတ္ထုကတော့ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာပါ ၀ င်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံချက်ကတော့သင် trilogy ပာဝယ်ယူပြီး၎င်းကိုအပြည့်အ ၀ ခံစားနိုင်ဖို့ပါ။
ဒီစာရင်းမှာပါတဲ့ဘယ်စာအုပ်တွေကိုသင်ဖတ်ရှုခံစားခဲ့ရပါသလဲ။။ ဤ ၀ င်ရောက်မှုမှတ်ချက်များအတွက်သီးသန့်ထားသည့်နေရာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖိုရမ်၌ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည့်လူမှုကွန်ယက်များမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » စာအုပ်များ » ချစ်သူများနေ့တွင်ပျော်မွေ့ရန်စုံလင်သောရင်ခုန်စရာစာအုပ် ၁၄ ခု
အိုင်တီ» CHEAP LITERATURE "၅၀ Shades of Grey" နဲ့စ
သင်၏ "အားထုတ်မှု" များကိုအခြားကိစ္စတစ်ခုသို့သင်အပ်နှံရန်သင့်အားအကြံပေးသည်။ စာကောင်းကောင်းဆိုတာဘာမှမသိဘူး။ «မင်းရဲ့ဖိနပ်ကိုဖိနပ်ထုတ်လုပ်သူ» !!
Carlos mantilla ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်းများ Kindles firmware update ကို ၅.၈.၇ မှ ၅.၈.၇.၁ သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်သင့်အားပြောပါသည်။
carlos mantilla သို့စာပြန်ပါ
Shifty Shades Fighter: စာအုပ်နှင့်မည်သူမဆိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သောရုပ်ရှင်နှင့်ခြားနားချက် ၁၀ ခု